အာမခံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » အာမခံ	8
Posted by ko six on May 17, 2015 in Poetry | 8 comments
မြန်မာစကားပုံမှာ ဘာမှ အာမခံမထားဘူးရယ်။
ko six has written 72 post in this Website..
ခင်ဇော် says: အာမခံ မရ တဲ့ ဘဝ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 199
ko six says: အာမခံထားကြည့်ချင်တယ်
မြစပဲရိုး says: . ကျည် ဆိုတာ လူသတ်ဖို့ အတွက်
. အောက်ဆီဂျင် ကတော့ တစ်ခြား ဒြပ်စင် နဲ့ ဓာတ်မပြုဘဲ သူ့ချည်း နေ ရင် အန္တရာယ် မရှိ.
. ရေ ရဲ့ဇစ်မြစ် က အဆိပ် အကြောင်းပြောနိုင်မလား
. မြို့တစ်မြို့ မှာ ဘယ်လိုလူတွေ နေတယ် သိရင် အာမခံ ရဲ ပါ့။
မသေသောဆေးသမား – မရှိ
မမှားသောရှေ့နေ – မရှိ
မလိမ်သော သမ္မတ – မရှိ
မမှောင်သောမြို့ – မရှိ
မတတ်သော ကျောင်းသား – မရှိ
ဒီလို မရှိတာ (တနည်း ရှိ) တွေ ကြောင့် တိုင်းပြည် မပျက်နိုင် ဘူး။
စေတနာမရှိ တဲ့ ဆေးသမား
သမာဓိအမှန် မရှိ တဲ့ ရှေ့နေ
တရား မရှိ တဲ့ သမ္မတ
မီး မရှိ တဲ့ မြို့
စဉ်းစားခွင့် မရှိတဲ့ ကျောင်းသား
အဲဒါတွေ ရှိနေတာ ကြောင့် ပြည်ပျက် နေတာ ပါ။
အဲဒါတွေ ကို မရှိ ဘူး လို့ အာမခံနိုင်ကြဖို့ လိုတယ်။
ko six says: ဟုတ်ကဲ့ပါမြစပဲရိုး
kai says: အာမတွေမဟုတ်ပဲ. အာထီးကြီးခံနိုင်တဲ့တနေ့…
Ma Ma says: မမှားသော ရှေ့နေ၊ မသေသော ဆေးသမားလို့ ကာဗာယူထားတာ စေတနာမှန်နဲ့ လုပ်နေကြသူတွေအတွက်ပဲဆိုရင် ကောင်းမယ်။
စေတနာမမှန်တဲ့ ပညာတတ်တွေနဲ့ အဲဒီကာဗာကြီးနဲ့ တွေ့တဲ့အခါကျတော့………. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် အာမခံမထားဘူး။
Alinsett @ Maung Thura says: ဘယ်သူကမှ ပျော်ရွှင်စေရမယ်လို့ အာမ မခံနိုင်ဘူး
.ပျော်ရွှင် ကောင်းမွံန်ခြင်းတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ရာက
ကိုယ့် ကိုယ်ပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ် ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို သတိရသွားတယ်